किन सुक्दै छन् मूल ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
किन सुक्दै छन् मूल ?
पुराना पोखरीहरूको संरक्षण र पुनरुत्थान गरेर, पुनर्भरण क्षेत्रको पहिचान गरी बर्खाको पानी रोक्ने संरचनाहरू बनाएर मूल/मुहानलाई दीर्घजीवी बनाउन सकिन्छ ।
पुस ५, २०७७ माधव ढकाल, सन्तोष नेपाल
मध्यपहाडी क्षेत्रका मूल, पोखरी र कुवाहरू पहाडी जनजीवनका आधारशिला हुन् । पहाडी जिल्लाका धेरै ठाउँमा पानीको स्रोत भनेकै मूलहरू हुन् । नेपालको एक करोडभन्दा बढी जनसंख्या मूलको पानीमा आश्रित छ ।
हालैका वर्षहरूमा पहाडी जिल्लामा मूलहरू सुक्दै गएकाले तिनमा आश्रित जीवन, सरसफाइ, स्वच्छता र जीविकोपार्जनमा धेरै नकारात्मक असर परेको छ । कुनैकुनै क्षेत्रमा त मूल सुकेकाले मानिसहरू बसाइँसराइ गर्नसम्म बाध्य भएका छन् । कोभिड–१९ बाट नेपालसहित विश्व आक्रान्त भएको यो समयमा रोगबाट जोगिने विभिन्न उपायमध्ये बारम्बार हात धुनु प्रमुख उपाय हो भन्दै नागरिकलाई सचेत गराइएको छ । पानीको उपलब्धता सीमित भएको यस अवस्थामा सबैले बारम्बार हात धुन चाहिने थप पानी कहाँबाट पाउनु ?
नेपालका सबै भूभागमा कोभिड–१९ सहित अन्य सरुवा रोगबाट जोगिन र जीविकोपार्जन सहज बनाउन नागरिकले पर्याप्त सुरक्षित पानीको उपभोग गर्न पाउनु आधारभूत मानव अधिकार हो । पानीको उपलब्धता र गुणस्तर बढाउने एउटा मुख्य उपाय मूलहरूको संरक्षण र भूमिगत जलभण्डारको पुनर्भरण हो । यस लेखमा मूलहरू किन सुक्दै छन् र सुकिसकेका वा सुक्दै गरेका मुहानलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे गरिएको छ ।
के हो मूल अथवा मुहान ?
भूमिगत जलभण्डार पुनर्भरण संरचनाहरूको निर्माण एकल प्रयासबाट सम्भव हुँदैन । संस्थागत संरचना निर्माण, प्रभावकारी शासन व्यवस्था, स्थानीय निकायसँग सहकार्य र महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय आदिसहितको बृहत् जनसहभागिता आवश्यक हुन्छ । भूमिगत जलभण्डार पुनर्भरणका कार्यक्रम पालिकाहरूको प्राथमिकतामा पार्न सके दिगो जलस्रोत व्यवस्थापनमा धेरै मद्दत पुग्छ । स्थानीय जलस्रोत संरक्षणप्रति लक्षित कार्यहरूमा स्थानीय निकायको सहयोग तथा स्थानीय ज्ञान र सीपलाई प्रयोग गर्न सके यसमा ठूलो टेवा मिल्छ । प्रायः सुक्खा मौसम वा खडेरीको समयमा मात्रै मूल संरक्षण गर्नेबारे विषय उठाउने तर वर्षातको समयमा त्यसबारे चर्चा नगर्ने प्रचलन छ । पहाडी जीवनको मुख्य आधारशिला मानिएको मूल तथा पोखरीको संरक्षणलाई वर्षभरि नै प्राथमिकतामा राख्न सके पानीसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान हुने तथा जीविकोपार्जनमा पनि सकारात्मक योगदान पुग्ने देखिन्छ ।जलाधार व्यवस्थापनका अनुसन्धानकर्ता ढकाल र जलवायु तथा जलविज्ञान समूहका टोली नेता नेपाल दुवै इसिमोडसँग आबद्ध छन् ।
प्रकाशित : पुस ५, २०७७ ०९:०३
शिक्षक दरबन्दी मिलान थालियो
अन्तरजिल्ला र जिल्लाभित्रकै स्थानीय तहहरूमा दरबन्दी मिलानको काम सुरु, तत्काल शिक्षक सरुवा भने नहुने
पुस ५, २०७७ सुदीप कैनी
काठमाडौँ — मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थीको अनुपात मिलाउन शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले बिहीबारबाट शिक्षक दरबन्दी मिलान थालेको छ । पहिलो चरणमा अन्तरजिल्ला र अन्तरस्थानीय तह गरी १ सय ८४ शिक्षकको रिक्त दरबन्दी मिलाउन गरिएको हो ।
प्रकाशित : पुस ५, २०७७ ०८:५६